FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA MPIANDRY OMBY CHOW - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika mpiandry omby Chow
Chow Chow / Alika Mpiandry Alemanina mifangaro
'Ny ray aman-drenin'i Louie dia mpiandry ondry alemanina madio sy Chow Chow. Toa mpiandry ondry kely izy, ny hany Chow Chow hitako dia misy teboka mainty amin'ny lelany. Louie dia 1 taona 8 volana amin'ity sary ity ary milanja 60 lbs. ary tena mahia sy lava. Hatramin'ny andro nitondrako azy nody tamin'izy 9 herinandro dia efa lasa izy go go. Tiany ny milalao, manenjika zavatra ary mihazakazaka. Tena mpankato izy, na izany aza. Entiko any amin'ny zaridaina alika im-betsaka isan-kerinandro mankany mifanerasera aminy . Tena tsara izy amin'ny alika sy olona hafa. ny mpiambina voajanahary tsara koa. Hihombo izy raha misy manodidina ny trano / mandondom-baravarana. Somary saro-kenatra ihany izy amin'ny olona vaovao fa manafana haingana be. Izy dia tsara manodidina ny alika / olona hafa. Mahafantatra fika maro izy ary mankatò azy ireo 90% amin'ny fotoana. Rehefa mandao ny trano aho dia tsy mila mametraka azy ao anaty tranom-borona, dia tsy niditra tao anaty fako mihitsy izy na nifoka izay zavatra tsy tokony ho nataony. '
Ny alika mpiandry ondry dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Chow Chow ary ny Mpiandry Alemanina . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Louie the Chow Shepherd toy ny alika kely amin'ny 3 volana any an-tokotany.
Louie the Chow Shepherd toy ny alika kely amin'ny 3 volana miaraka amin'ny kilalaony.
Louie the Chow Shepherd toy ny alika kely amin'ny 9 herinandro
'I Lilly ity Mpiandry Alemanina / Chow Chow afangaro amin'ny 4 taona. Izy koa dia manana lela misy pentina tsy mahita ianao. Noraisiko izy rehefa feno herintaona. Alika mahafinaritra izy. Tena tsy mivadika amiko izy. Raha nandalo afo aho dia hataony izany. Tiany koa ny fianakaviako fa rehefa hitany aho dia toy ny mbola tsy hitany ahy mandrakizay. Tena manan-tsaina izy. Azoko atao ny milaza azy hijanona ary tsy tokony hihazakazaka amin'ny arabe raha tsy mihetsika mandra-pahatongako lazao hoe avia . Hilalao fetsy izy fa vetivety ihany. Rehefa mandre tabataba avy eny ambonin'ny fefy izy dia miandry hahita izay hataoko. Raha miteny aho hoe tsia dia tsy hanao n'inona n'inona izy ary raha miteny aho hoe: 'Lilly inona izany?' Avy eo izy dia hihazakazaka ary hampandeha ny fivoahan'ny rindrina. Aleony manaraka ahy fa tsy olon-kafa. Tsy alika masiaka izy fa alika mpiaro. Fantatro izy hanisy ratsy ny famantarana iray ary hamoaka fa tsy hanaikitra, hampitandrina. Hiforitra am-pifaliana ao anaty ondana aho fa rehefa manomboka mandady eo am-pandriana aho dia mivoaka ary amin'ny tany mankany am-pandriana. Rehefa irery izy any ivelany dia tsy hivoaka izy raha tsy hoe misy mihoatra ny fefy fa raha miantsoantso ny anarany aho indray mandeha dia hitsahatra tsy hiteny. Tsy mivovo ao an-trano mihitsy izy. Raha tsy ao amin'ny efitranoko izy ary maheno feo hafa ao an-trano, saingy azoko atao ny miteny hoe mijanona na avelako izy hihazakazaka mankany amin'ilay olon-tsy fantatra mba hanimofona fotsiny fa tena tsy miraharaha an'ilay olona izy. Halany ny tototry ny azy vahiny izaho sy ny ankohonako ihany ary izaho sy ny namako mpivady. Halany rehefa misy olon-tsy fantatra mitsangana eo ivohony. Tsy mampaninona azy izany alika raha mbola izy ireo kely kokoa avy eo izy . Halany rehefa alika mihoatra ny fefy. ny mpanao ady totohondry tonga tany amin'ny tranonay indray mandeha ary nanafika izy. TSY TSARA. Nopotehiko haingana be io fantatro ny loza io, (Teknolojia mpitsabo nify aho). Manaraka ahy hatraiza hatraiza izy. Tiany ny fianakaviako fa rehefa eo aho dia hihaino ahy fotsiny izy. Tsy mandeha an-dàlambe izy satria hanaraka ahy na aiza na aiza. Hihazakazaka sy mibontsina izy ary mimenomenona. Ary tsy tia olon-tsy fantatra tonga ao an-tokontany. (Nahafantatra fa ny sarotra amin'ny zaridaina).
Manana lalao aho manenjika azy aho ary manodinkodina manodidina ny hazo izy fa mijanona ary mihazakazaka aho dia hihazakazaka ary hanaikitra ny tanako na ny pataloha fohy na lobako sy ny hoditr'akoho ary hikorontana fa raha mihodina aho ary manenjika azy dia hatahotra sy hihazakazaka avy eo miondrika ary mamela tsara ny hodi-kazo, fa rehefa miteny Lilly intsony aho dia hijanona avy hatrany izy ary hanatona ahy hahafahako manoroka azy. Rehefa Aho fahana izy napetrako teo alohany ny sakafo fa tsy hihinana izy mandra-pipetrany ary ahopiko ny paokony. Hamoaka fanafody avy amin'ny vavany izy raha holazaiko azy. Tena tsy mivadika amiko izy, fantany fa tiako izy ary noraisiko izy. Izy no zanako '
'Ity no Negra, fifangaroan'ny mpiandry ondry Chow / Alemanina 14 taona mampiseho ny lelany mainty'
Lady ThunderPaw the Chow Chow / Alemanina Mpiandry Ondry mifangaro alika 12 taona— 'Lady dia famonjena avy amina alika NYC tamin'ny Andron'ny mpifankatia. Mety ho 2 taona izy tamin'izay fotoana izany ka mieritreritra aho fa manodidina ny 13 taona izao izy. Tena nazoto be izy, marani-tsaina ary tsy nihinana tamin'ny vilia nataony raha tsy nahazo alalana, tiako ny miaraka amin'ireo zafikeliko sy amiko mandrakariva. Ny fahazarany ratsy indrindra hitako teo am-piandohana dia ny fanaovana an-keriny alika hafa izay azo inoana fa vokatry ny fihazonana azy nandritra ny fotoana maharitra teo amin'ny kilao. Ankehitriny dia efa antitra izy aretin-tsaina ary miadana miadana ... mamelona azy aho an sakafo tena tsara SY mandehana azy indroa isan'andro mitazona hozatra ary mitazona ny findainy. Mifamatotra tahaka ny olombelona sy ny alika rehetra isika amin'ity fiainana ity. Izy no tsara indrindra ary mivavaka isan'andro aho mba ho tonga amin'ilay olona heveriko ho misy ahy. '
Lady ThunderPaw the Chow Chow / Alemanina Mpiandry Ondry mifangaro alika amin'ny 12 taona
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ilay mpiandry ondry Chow
Sary Chow Shepherd 1
pitbull terrier lab mifangaro alika kely
fampahalalana momba ny alika any an-tendrombohitra lehibe kokoa
retriever volamena yorkie Mix alika kely